हवाईजहाज चढेर हुम्ला पुग्यो एक करोड बराबरको तरकारी – Everest Dainik – News from Nepal
हवाईजहाज चढेर हुम्ला पुग्यो एक करोड बराबरको तरकारी
सिमकोट, साउन ९ । हुम्ला जिल्लाई सडक यातायातले जोडेको छैन । नेपालकै दुर्गम मध्येको एक जिल्ला हुम्लामा वर्षमा हवाई चढेर एक करोड १२ लाख रुपैयाँयाको तरकारी पुग्छ भनेर धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । तर तथ्याङ्बाट त्यो कुरा पुष्टि भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा हुम्ला सिमकोटमा मात्रै एक करोड १२ लाख बराबरको तरकारी आयात भएको छ ।
आवश्यक अनुसार तरकारी उत्पादन नभएपछि नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट महङ्गो हवाई ढुवानी गरेर तरकारी आयात भएको हो । यसमा यात्रुहरुले साथमा ल्याउने तरकारीको मूल्य समावेश गरिएको छैन । मङ्सिरदेखि जेठ महिनासम्म प्रतिदिन दुईसय क्वीन्टल र असारदेखि कार्तिक महिनासम्म प्रतिदिन औसत एकसय क्विन्टल तरकारी नेपालगंज र सुर्खेतबाट सिमकोटमा हवाई मार्गबाट ढुवानी भएर आउने उद्योग बाणिज्य संघ हुम्लाका विमानस्थल प्रतिनिधि टेकबहादुर रोकायाले बताए ।
मानसरोवर कैलाशको पर्यटकीय सिजनमा हेलिकोप्टरबाट तरकारी होटेल व्यवसायीहरुले भित्र्याउने गरेका छन् । यसरी प्रत्येक दिन प्रत्येक यात्रुहरुले दुईचार किलो हरियो तरकारी हातमै बोकेरै आउने गरेका छन् । अहिले नेपालगंजबाट प्रतिकिलो ढुवानी दर एकसय २० रुपैयाँ र सुर्खेतबाट प्रतिकिलो एकसय पाँच रुपैयाँ रहेको छ । गएको एक वर्षमा जेठदेखि कार्तिकसम्म एकसय ५० दिनमा प्रतिदिन एकसय केजी तरकारी नेपालगंज र सुर्खेतबाट हवाई मार्गबाट ढुवानी हुँदै आएको छ ।
मङ्सिरदेखि जेठसम्म दुई पाँचदिन प्रतिदिन दुईसय किलो तरकारी सीता, तारा र समिट एयरका जहाजहरुले बोक्दै आएका छन् । सुर्खेत र नेपालगंजको ढुवानी दर दश रुपैयाँ प्रतिकिलो फरक भए पनि सिमकोट बजारमा मूल्य एकनास रहेको छ ।
नेपालगंज र सुर्खेतमा तरकारीको पसल मुल्यसहित तरकारीको प्रतिकिलो चारसयसम्म तरकारीको मुल्य पर्ने स्थानीय व्यापारी सृष्टि बिसीले बताइन् । यसरी तरकारीको मुल्य महङ्गो हुनुको कारण चर्को ढुवानी भएको उनले दाबी गरे । हाल सिमकोटमा तरकारीका खुद्रा पसलहरु आठवटा रहेका छन् ।
हरियो तरकारी बाह्र महिना उत्पादन नहुने भएपछि महङ्गो हवाई ढुवानी तिरेर तरकारी उपयोग गर्नु वाध्यता रहेको स्थानीय जीवन परियारले दुखेसो पोखे । ऋतु अनसार सबै तरकारी आवश्यकता अनुसार नपाईने र बेमौसमीमा साग र धनियाँबाहेक अरु तरकारी उत्पादन नहुने भएपछि यस्तो बाध्यता आइपरेको उनले बताए । गैरस्थानीय सरहनै हुम्लामै उत्पादन भएका तरकारीको मुल्य राख्नाले स्थानीय थप मर्कामा परे पनि यसप्रति कसैको ध्यान जान सकेको छैन । गोरखापत्र दैनिकबाट
ट्याग्स: तरकारी, हवाईजहाज, हुम्ला
के गर्मी महिनामा कोरोना महामारी कम होला ? यस्ता छन् विज्ञका तर्क
कोरोनाविरुद्ध जुध्न उच्चस्तरिय संयन्त्र बनाउनुपर्छः प्रचण्ड
अमेरिकामा एकैदिन १९ सयको मृत्यु, साढे ४ लाख नाघे संक्रमित
लकडाउन उल्लंघन गर्दै ‘चैतली मेला’ लगाउने ४ वडा अध्यक्ष छुटे, जरिवाना के ?
नेपालका कोरोना सङ्क्रमितको अवस्था कस्तो छ ?